हेर्दा हेर्दै धान खेत बगर बनेपछि‍‍‍‍...
२० आषाढ २०७८, आइतवार
तनहुँ- फाँटमा लहलह धानको बाला झुल्दै थियो । भकारीको धान हाल्ने तयारी गर्दै थिए किसान । धान थन्काएर बर्षदिन भोको पेट भर्न ढुक्क थिए किसान । ब्याडमा विउ हरियो बन्दै थिए । रोपेको धानले गाज हाल्दै थियो । किसानले पाकेको मकै थन्काउन पाएनन् ।
भिषण बर्षाले तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर ८ र १० मा किसानको पसिना बाढीले बगायो । ढोर क्षेत्रका हरिया फाँटहरु बगरमा परिणत भए । बर्षभरी के खाएर बाँच्ने ? बगरको थुप्रो हटाएर फेरी कसरी रोपाई गर्ने ? किसनहरू यही पीडाले छट्पटी रहेका छन् ।
कर्णालीमा असार १५ काे रमझम
थातथलो फेर्दै राउटे
ओझेलमा बैतडीको पञ्चदेवल शिवधाम